Kali NetHunter App Chitoro, chengetedzo app chitoro che Android | Linux Vakapindwa muropa
Imwe yeanonyanya kufarirwa maitiro ekubavha kugovera ndeye Kali Linux. Iko kugovera kunogadzirwa neInogumbura Security, iyo zvakare inogadzira zvimwe zvishandiso senge NetHunter izvo zvinotibvumidza kuyedza kuchengetedzwa kwemidziyo yedu kubva kune yedu Android kifaa. Nekutaridzika kwayo, kambani inofarira kuda nharembozha yekushandisa kweGoogle uye danho rayo rekupedzisira mune izvi rave rekutanga Kali NetHunter App Chitoro.
Asi chii chinonzi Kali NetHunter App Store? Kubva pazita rayo, zviri nyore kufunga kuti chitoro cheapp. Android ine zvitoro zvekushandisa zviripo, pakati pazvo tine yepamutemo Google (Google Play), Amazon, zvimwe zvinokatyamadza senge Aptoide uye, kubva nhasi mubeta, chitoro chekushandisa umo isu tinongowana chete Android chengetedzo maapplication anoenderana. Inogumbura Security's nyowani nharembozha app chitoro ichatipa isu maapplication ayo anoshandiswa kune akadzika midzi kana asina kudzika midziyo uye kuti kana kwete kana ivo vari NetHunter.
Kali NetHunter App Store, iyo yekuchengetedza chitoro
Kali NetHunter App Chitoro ishanduro yakagadziridzwa zvishoma ye F-Droid. Tinogona zvakare kuiwana kubva webhusaiti yako ine bhurawuza rakafanana neFirefox, panguva iyoyo patinozoona kuti ichiri mubeta. Kubva pachikamu chayo che «Bhurawuza» tinogona kutsvaga kana kuona maapplication ... kana kuti verenga, nekuti panguva yekunyora chinyorwa ichi haugone kuona zvidhori zvavo (uye kwete, hazvisi kuti Firefox chengetedzo «inoputsa» peji ). Pakati pezvakanaka kunyorera zvatichawana, isu tine:
NetHunter (app), NetHunter Chitoro, NetHunter Terminal, uye NetHunter VNC.
NetHunterStore Yakaropafadzwa Kuwedzeredzwa.
Mazhinji mafomu atichawana mune ino chitoro cheapp anove asingafadzi kune wepakati mushandisi, asi iwo anozove anonakidza kune avo vanoda kushandisa zvehunhu kugura maturusi pane yavo Android foni. Chero zvazvingaitika uye kunyangwe isu tichigona kufunga kuti zvakawandisa, kuva nesarudzo kwakanaka nguva dzose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Inogumbura Security inotangisa Kali NetHunter App Chitoro, chengetedzo app chitoro cheApple
kuti zvaisazove nyore kwavari kubatanidza dura ravo ne f-droid uye nekudaro havaite chimwe chitoro
Pindura kuna kingdelafuria